कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६ हजार दरवन्दी खुल्ला गर्ने
निशान न्युज बैसाख ३०, 2077
काठमाडौं । गत डिसेम्बरको अन्त्यबाट चीनको बुहान शरहबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणले विश्व हल्लाइदिएको छ । त्यसको प्रभाव साना ठूला अधिकांस देशमा परेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशलाई झन ठूलो असर गरेको छ ।
कारोनाको संक्रमणका कारण आर्थिक व्यवस्ता नै तहसनहस भएको अवस्थामा विश्वमा करोेडौ युवा बेरोजगार हुने अवस्थामा छन् । गत चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनका कारण नेपालमा दक्ष र अर्धदक्ष गरी लाखौं युवा बेरोजार हुने अवस्था छ ।
देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्ने अवस्था आएपछि सरकारले लोक सेवा आयोगले लिन बाँकी रहेका सबै परिक्षा स्थगित गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारको निर्देशन बमोजिम लोक सेवा आयोगले पहिलो चरणमा परिक्षा भइसकेका बाहेक सबै प्रकारका परिक्षा स्थगित गरिसकेको छ ।
लोक सेवा आयोगले नै सबै प्रकारका विज्ञापन स्थगित गरेपछि रोजगारीका लागि लोक सेवाको तयारी गरिरहेका लाखौं जनशक्ति अन्यौलमा परेका छन् ।
लोक सेवा आयोगले सबै प्रकारका परिक्षा स्थगित गर्दा निरास भइरहेका बेला यो वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६ हजार दरवन्दी खुल्ला गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले बजेटसमेत तयार गरिसकेको छ ।
हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने गरी स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु सेवा तर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङ कार्यक्रम बनाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बीउबिजन उत्पादन, चक्लाबन्दीमा केन्द्र कृषि खेती, सहुलियत ऋण, लागतको मूल्यांकन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सहजीकरण र कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने रणनीतिसहित बजेट कार्यक्रम बनाएको हो ।
मन्त्रालयले आफ्नो वाषिएक बजेट तयार पार्दा ६ हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना पनि बनाउको छ । यद्यपि लकडाउन जारी हिररहेका कारण मन्त्रालयले कहिले विज्ञापनगर्छ भन्ने केही तय भइसकेको छैन ।
लोकसेवाले खुलायो ६३८ पदमा (विज्ञापन सहित)
काठमाडौँ । लोकेसवा आयोगले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाको तयारी थालेको छ । राजपत्रांकित प्रथम ...
जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्वीकृति दिएको छ ...
अन्ततः रोकिएका लोकसेवा आयोगका सबै परीक्षा सुचारु हुँदै, कहिले हुँदै छ परीक्षा ?
काठमाडौं । के तपाई लोकसेवा आयोगको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ? के कोरोना संक्रमणले स्थगित भएको लोकसेवा ...